Liraglutide: zava-mahadomelina tsara amin'ny fikarakarana ny diabeta Mellitus Type 2 sy ny hatavezana
Liraglutide (204656-20-2) dia fanafody amidy amin'ny alàlan'ny marika marika samihafa any amin'ny faritra maro eran'izao tontolo izao, izay ampiasaina amin'ny tanjona fitsaboana samihafa. Ny marika Liraglutide marika mahazatra indrindra eny an-tsena ankehitriny dia i Victoza sy Saxenda. Ny fampiasana Liraglutide dia miankina amin'ny marika izay vidianao, ohatra, i Victoza dia matetika ampiasaina amin'ny fanazaran-tena sy ny sakafo mety hanamafisana ny fifehezan-dra amin'ny olon-dehibe ary manao karazana diabeta 2 diabeta amin'ny ankizy tsy ampy taona folo. Ho fanampin'izany, i Victoza koa dia nanaporofo fa tena ilaina amin'ny fampihenana ny olana amin'ny aretim-po toy ny lalan-drà na aretim-po amin'ny olon-dehibe miaraka amin'ny aretim-po ary manao diabeta 2.
Ny famarotana Liraglutide dia misy amin'ny fivarotana an-tserasera isan-karazany sy ny fivarotam-panafody ara-batana, saingy tokony hitandrina foana amin'ny loharanoo ianao. Manaova fikarohana lalandava mba hahazoana antoka fa mahazo ny sakafonao amin'ny mpivarotra azo itokisana sy za-draharaha. Ny kalitao amin'ny fanafody raisinao dia misy fiantraikany amin'ny valiny hitranga amin'ny faran'ny tsingerin'ny dosage. Ny vidin'ny Liraglutide dia mety miovaova avy amin'ny loharano iray mankany amin'ny iray hafa fa kosa azonao antoka fa hahazo ny kalitao tsara indrindra ianao. Raha tsy azonao antoka momba ilay loharano ianao, makà manatona manam-pahaizana momba ny fitsaboana anao.
Ny FDA dia nankatoavin'i Victoza sy Saxenda ho fitsaboana ny aretina ara-pitsaboana samihafa any Etazonia. Arak'izay voalaza tetsy aloha, dia nankatoavina i Victoza amin'ny fitsaboana ny aretim-po ary manao karazana diabeta 2. Fantatra ihany koa amin'ny fampihenana ny soritr'aretina gastrointestinal toy ny feta, ny tailo ary ny fivalanana. Ny Saxenda dia nankatoavin'ny FDA ihany koa mba hanampy amin'ny fitsaboana ny fihenan'ny maso sy ny fifehezana ny lanjany. Ny Liraglutide dia tokony halaina raha te hampihena ny aretim-po ianao izay vokatry ny aretim-po na manao karazana diabeta 2 mellitus. Ary raha te hifehy ny lanjan'ny vatanao ianao amin'ny vokatry ny diabeta type 2 mellitus, ny hatavehivavy Liraglutide dia ho fanafody tena tsara ho anao. Liraglutide hatavezana efa nanampy ireo mpampiasa maro hitantana ny lanjany koa izy ireo. Na dia mahatsapa soritr'aretina azo tsaboina amin'ny vovony Liraglutide aza ianao, aza maka ilay zava-mahadomelina raha tsy mifampidinika amin'ny matihanina amin'ny fahasalamana. Na izany aza, tadidio fa ny dokotera koa dia afaka manoratra an'io zava-mahadomelina io aminao hanampiana amin'ny fitsaboana amin'ny toe-pahasalamana hafa tsy voatanisa ato amin'ity lahatsoratra ity.
Amin'ny tranga maro, i Liraglutide dia miankina amin'ny zavatra tadiavinao amin'ny faran'ny ny tsingerin'ny fatra. Ohatra, ny fomba fiasan'ny Liraglutide ho an'ny olona mitondra fatra liraglutide ho an'ny fihenan'ny lanjany dia hafa noho ireo mpampiasa izay mikarakara izany ho an'ny fitsaboana ny diabeta type 2. Ireo marika Liraglutide roa Victoza sy Saxenda miasa tsy mitovy raha vao miditra ao amin'ny rafitra vatanao.
Ohatra, ny Liraglutide obesity (Saxenda) dia miasa amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny famokarana hormonina mihinam-pitiavana (gliosida-toa-peptide na GLP-1), izay mifehy ny hanoanana anao. Amin'ny fotoana hidinan'ny famokarana GLP-1, ny filanao dia hidina ary hiafara mihinana kaloria vitsy kokoa, ary rehefa ela ny ela dia very ny lanjan'ny vatanao. Ny kaloria dia tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny lanjan'ny vatanao, ary raha afaka mifehy azy ireo ianao, dia ho mora aminao ny handatsaka menaka vitsivitsy.
Amin'ny lafiny iray, Victoza dia miasa amin'ny fomba telo samihafa hanaterany ny valiny nampanantenain'ny mpanamboatra fanafody. Voalohany, i Victoza dia miasa amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny sakafo avelan'ny vavoninao, izay manitsy ny haavon'ny siramamy ao amin'ny vatanao. Na dia io mekanika io aza, ny fanafody dia manakana ny fonao tsy hamokatra siramamy be loatra. Farany, Liraglutide, izay singa lehibe ao amin'ny Victoza, dia mandrisika ny pancreas anao hamokatra insuline bebe kokoa rehefa avo ny siramamy siramamy. Manatsara ny hetsika rehetra ireo fanafody amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fahombiazan'ny sela beta. Ny sela dia manampy amin'ny fifehezana siramamy amin'ny alàlan'ny famoahana ny insuline, izay manivana ny haavon'ny siramamy amin'ny rafitrao. Ny fanentanana ny famokarana insuline ao amin'ny vatanao no antony voalohany mahatonga an'i Victoza indrindra amin'ny fitsaboana azy nitendry 2 diabeta diabeta.
Liraglutide dia zava-mahadomelina azo tsindrona izay tokony hokarakaraina amin'ny sandrinao ambony, ny kibony, na ny feny. Tsy misy fotoana voafetra ho anao hanina ny fatran'ny Liraglutide, saingy azonao alaina izany na tsy misakafo. Azonao atao ny manodina ny tranobe tsindrona liraglutide hampihenana ny voka-dratsy sy ny fanaintainanao mety hitranga amin'ny faritra. Ny fotoana fitantanana ny fatra dia azo ovaina tsy misy dikany raha tsy manitsy ny fatra napetraka. Tsara homarihina foana Ny tsindrona Liraglutide hita maso; Tokony hoentinao ny tsindrona raha tsy misy loko ny vahaolana ary tsy misy singa hita maso. Raha toa ka miteraka loko tsy mahazatra ny vahaolana, aza maka izany raha tsy manontany amin'ny dokotera anao.
Ny fatran'ny liraglutide powder dia miankina amin'ny fandeferana amin'ny vatanao, ny taonany ary ny toe-pahasalamana hitsaboana.
Ny fatra voalohany 0.6mg isan'andro dia natao hampihenana ny soritr'aretin'ny gastrointestinal vokatry ny fiandohan'ny fitsaboana ary tsy ampy ho an'ny fifehezana glycemic. Na izany aza, ny Liraglutide dia tsy mpisolo insuline ary ny marary manana diabetes 1 diabetes mellitus na ketoacidosis diabeta dia tsy tokony handray an'io. Rehefa manomboka an'io fitsaboana io ianao dia eritrereto ny hampihenana ny tsiambaratelo insuline mba hampihenana ny risika hypoglycemia.
The famonosana liraglutide Ny fitomboan'ny fatra dia tokony hofidina, hanamaivana ny mety hisian'ny soritr'aretin'ny gastrointestinal. Ny fanitsiana ny fatra dia mety hahemotra mandritra ny herinandro fanampiny hahazoana vokatra tsara kokoa. Na izany aza, ny dokotera dia tokony hitari-dalana anao amin'ity dingana ity. Ny fatra voalohany eto dia 0.6, izay tokony hakana subcutaneously indray mandeha isan'andro. Tamin'ny herinandro faharoa, dia azo nitombo ho an'ny 1.2mg isan'andro ny fatra; amin'ny herinandro fahatelo, ny fatra dia azo atsangana bebe kokoa amin'ny 1.8 isan'andro. Amin'ny herinandro fahefatra dia tokony hampitomboina koa ny fatra amin'ny 2.4mg ary ny herinandro fahadimy amin'ny 3mg indray mandeha isan'andro. Na izany aza, ny mpitsabo anao dia hitari-dalana anao momba ny fotoana sy ny fomba hanatsarana ny fatra.
Ny fikojakojana fikojakojana eto dia 3mg indray mandeha isan'andro, fa raha tsy afaka milefitra amin'izany ny vatanao, dia afaka manoro hevitra anao ny dokotera mba hanajanonana ny fatra. Ny fitantanana ny lanjany mahery setra amin'ny fampiasana io zava-mahadomelina io dia tsy nahatratra fatra mahery. Momba ny obesity, ny marika Saxenda Liraglutide dia nanaporofo fa tena ilaina amin'ny fitantanana lanja, ary ny fanafody dia tsy ampiasaina amin'ny fitsaboana ny mellitus diabeta 2. Na izany aza, Victoza dia malaza amin'ny fikarakarana ny aretin'ny diabeta 2 diabeta sy ny olana aretim-po.
Ny fatran'ny tsindrona liraglutide dia tokony hoentin'ireo ankizy tsy ampy taona folo farafahakeliny. Izay zaza ambany noho izany dia tsy tokony omena an'io zava-mahadomelina io na dia mampiseho soritr'aretina azo karakaraina amin'ity peptide ity aza izany. Ny fatran'ny liraglutide pediatrika dia miankina amin'ny fepetra ara-pahasalamana ihany koa. Ireto fatra raisina atolotra ireto dia toy izao;
Ny fatran'ny tsindrona Liraglutide voalohany dia natokana ho 0.6mg, izay tokony homena indray mandeha isan'andro mandritra ny herinandro farafahakeliny. Aorian'io, ny fatra dia azo ampitomboina amin'ny 1.2mg isan'andro, ary raha tsy tratra ny fifehezana glycemic dia afaka mampitombo ny fatrany ny fanafody amin'ny 1.8 gm amin'ny herinandro manaraka. Ny fatra farany be indrindra ho an'ny karazana diabeta karazana roa dia 1.8mg isan'andro, raha toa kosa ny fatra amin'ny fikojakojana ny 0.6mg ka 1.8mg isan'andro.
Ny marika Liraglutide Victoza dia nampiasaina sy nankatoavin'ny FDA amin'ny fitsaboana ny 2 karazana diabeta. Ny fanafody dia manampy amin'ny fifehezana siramamy amin'ny vatanao. Raha avo be amin'ny vatanao ny haavon'ny siramamy, ny mouaglutide dia mandrisika ny pancreas anao hamokatra enzim-insuline fanampiny izay manampy amin'ny fampihenana ny glucose ara-dra.
Tany Etazonia, FDA dia nankasitraka ny Liraglutide ho fitsaboana ny hatavezana taorian'ny nanaporofo fa mahomby amin'ny famoahana ny faniriana sy ny fitrandrahana kaloria izay nanampy tamin'ny fitantanana ny lanjany. Raha ny salanisa, ny vehivavy dia mahatsapa fihenan-danja lehibe rehefa maka lanja mavesatra amin'ny ranon-doha izy ireo mihoatra ny lehilahy. Na izany aza, tsy midika akory izany fa tsy handray soa amin'ity zava-mahadomelina ity ny lehilahy. Ho an'ny traikefa mampihena lanja bebe kokoa amin'ity fanafody ity, ny sakafo sy ny fanatanjahan-tena mety dia tokony hiaraka amin'ny fatra.
Io zava-mahadomelina io koa dia voalaza fa misy fiantraikany tsara amin'ny fanatsarana ny fahasalaman'ny atidohanao, fanampiana amin'ny fifehezana ny tebiteby, ary mety ho anti-oxidant sy anti-inflammatory io. Tao amin'ny fandalinana ara-pitsaboana iray hafa dia nampiseho ny liraglutide fa afaka manampy ny olona manana toaka io. Na izany aza, ny overdose liraglutide dia afaka manala anao amin'ny fahalemena amin'ny fahasalamana ary manimba ireo tombontsoa rehetra antenaina.
Saika ny zava-mahadomelina rehetra, rehefa diso tafahoatra na overdosed dia afaka mamoaka anao amin'ny voka-dratsy mahery vaika, ary tsy mampiavaka ny liraglutide. Na izany aza, indraindray ny fiantraikany amin'ny lafiny dia mety ho vokatry ny fomba fihetsikin'ny vatanao amin'ny fatra lanjan'ny lanja liraglutide. Ny sasany fampitandremana liraglutide dia mahazatra ary nanjavona miaraka amin'ny fotoana, fa raha tsy izany dia tsy hanjavona intsony ny vokatr'ireto farany na lasa mafy loatra, dia mitadiava fitsaboana;
Misy ny fampitandremana liraglutide tena mafy izay mitaky fitsaboana haingana eo am-pombanao manomboka azy ireo ary tafiditra ao anatin'izany;
Ho an'ireo matotra ireo Liraglutide effects, manoro hevitra anao ny hanajanona ny ratra avy hatrany rehefa mitady fanampiana ara-pitsaboana.
Araka ny liraglutide reviews amin'ny sehatra an-tserasera samy hafa, maro ny mpampiasa no afa-po amin'ny valiny sy ny tombony azon'izy ireo na rehefa avy naka zava-mahadomelina aza. Ny fandalinana ara-pitsaboana dia maneho ihany koa ny fomba mahasoa ny fanafody amin'ny fitsaboana ireo aretina ara-pitsaboana isan-karazany toy ny hatavezana, karazana 2 diabetes mellitus, olana amin'ny renal ary amin'ny fisorohana ny aretim-po vokatry ny toe-pahasalamana samihafa. Ny fifandraisan'ny liraglutide dia nanaporofo ihany koa fa mahomby amin'ny fitsaboana ny 2 karazana diabeta amin'ny zaza tsy ampy folo taona.
Na izany aza, ny mpampiasa sasany dia manana traikefa ratsy amin'ity zava-mahadomelina ity, fa mety ho azo ampiharina amin'ny overdose na Liraglutide na fandeferana amin'ny vatana. Ny vaovao tsara dia ny miova ny lafiny lafiny liraglutide raha mifandray amin'ny dokotera anao amin'ny fotoana mety. Ny fomba tsara indrindra hialana amin'ny fiantraikany ratsy amin'ny alàlan'ny fihinanana ity zava-mahadomelina ity dia mandeha amin'ny fizaham-pahasalamana alohan'ny hanombohanao ny fatrao ary avelao ny fanafody hametraka ny dosage mety aminao. Ilaina ihany koa ny manaraka torolàlana amin'ny dosage ary ampahafantaro ny dokotera ny fanafody hafa azonao alaina.
Io zava-mahadomelina io dia voaporofo fa tena ilaina amin'ny tontolo ara-pitsaboana bebe kokoa noho izany amin'ny fikarakarana ny hatavezana, karazana diabeta 2 ary olana amin'ny fo, hafa. Liraglutide vovoka (204656-20-2) ny varotra dia hita any amin'ireo fivarotana an-tserasera samihafa, saingy ho hitanao izany amin'ny anarana marika marobe toa an'i Saxenda sy Victoza. Na izany aza, azonao antoka fa azonao ny zavatra ampiasaina amin'ny marika tsirairay alohan'ny hanaovana ny baikonao. Araka ny voalaza etsy ambony, ny marika liraglutide tsirairay dia ampiasaina amin'ny tanjona manokana. Saxenda dia ankatoavina amin'ny fihenan'ny lanjany sy ny fitsaboana ny fihenan-doha raha toa kosa i Victoza dia ampiasaina amin'ny fitsaboana diabeta 2 ary koa ny aretim-po vokatry ny fatran'ny siramamy avo lenta. Na izany aza, araho ny torolalana amin'ny fatra mba tsy hisedra ny fiantraikany amin'ny lafiny Liraglutide.
Tsara kokoa ny hanao fikarohana mety momba anao mividy liraglutide loharano alohan'ny hanaovana ny fividiananao. Ankehitriny dia betsaka ny mpivarotra peptide eny an-tsena, ka sarotra aminao ny hahafantatra hoe aiza no hahazoana fanafody kalitao izay hanome antoka anao valiny mahavariana. Jereo ny lesoka liraglutide ao amin'ny tranokalan'ny mpivarotra mba hahazoana sary momba ny vokatra sy ny fomba fiasan'ny mpivarotra. Ny fisafidianana ny mpamatsy fividianana liraglutide be traikefa sy malaza dia manome toky anao ny serivisy kalitao ary koa ny vokatra ara-pitsaboana kalitao. Ny vidin'ny Liraglutide dia miovaova amin'ny mpivarotra iray mankany amin'ny iray hafa.
Kaakeh, Y., Kanjee, S., Boone, K., & Sutton, J. (2012). Liraglutide ‐ ratra amin'ny aretin'ny voa. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Therapy fitsaboana, 32(1), e7-e11.
Maret, SP, Daniels, GH, Brown-Frandsen, K., Kristensen, P., Mann, JF, Nauck, MA,… & Steinberg, WM (2016). Ny vokatra Liraglutide sy kardia amin'ny diabeta karazana 2. New England Journal of Medicine, 375(4), 311-322.
Lind, M., Hirsch, IB, Tuomilehto, J., Dahlqvist, S., Ahrén, B., Torffvit, O.,… & Sjöberg, S. (2015). Liraglutide ao amin'ny olona voatsabo amin'ny diabeta karazana 2 izay misy tsindrona isan'andro isan'andro: ny fitsapana klinika nisedra (fitsapana MDI Liraglutide). Bmj, 351, h5364.
Davies, MJ, Bergenstal, R., Bode, B., Kushner, RF, Lewin, A., Skjøth, TV,… & DeFronzo, RA (2015). Fahombiazan'ny liraglutide amin'ny fatiantoka mavesatra eo amin'ireo marary manana diabeta karazana 2: ny fitsidihan'ny diabeta SCALE randomised. Jama, 314(7), 687-699.
Ny vovony peptide Degarelix: fanafody tena izy nampiasaina ho an'ny homamiadana Prostate